Ciidamada Puntland oo Qabtay Xubno Al Shabaab iyo Qaraxyo, (WAR SAXAAFADEED) – SBC
Ciidamada Puntland oo Qabtay Xubno Al Shabaab iyo Qaraxyo, (WAR SAXAAFADEED)
WAR SAXAAFADEED 18 November 2012
Ciidamada amniga ee Dowladda Puntland ayaa gacanta ku dhigay xubno muhiim ah oo ka tirsan Kooxda Al Shabaab iyo qaraxyo ay usoo wadeen magaaloyinka Puntland.
Ciidamada amniga Puntland oo helay xog ayaa shalay [17 Nov. 2012] howlgal ay ka fuliyeen magaalada Galkacyo gacanta ku dhigay Maxamud Nux
Aden (“Abu Xafsa”) ninkaasoo ah Madaxa kooxda dilalka iyo qaraxyada fulisa ee Al Shabaab (“Amniyaadka”), wuxuuna hore u ahaan jiray Madaxa Ilaallada
Axmed Cabdi Godane (oo la baxay Muqtar Cabdiraxman Abu Zubeyr).
Sidoo kale, ciidamada amnigu waxay gacanta ku dhigeen Cabdirizak Xuseen Tahliil (“Ilkacase”) oo ah Madaxa Saadka iyo Sahayda kooxda Al Shabaab
waxaana xilligii lasoo qabanayay xubnahaasi ay siteen walxaha qarxa oo kala duwan, sida:
• F1 bam-gacmeedyo; • Noocyada kala gedisan ee baaruuda qaraxyada (sida TNT, IWM); • Daasado ay ku jiraan qaraxyo diyaarsan; • Teleefanada gacanta iyo rimuutyo (remote controllers); • Filooyin iyo fiyuusyo (wires and fuses); • Saacado iyo Batariyo;
Sidoo kale, howlgal ay ciidamada amniga Puntland ka sameeyeen deegaanka
Buraan ee Gobolka Haylaan ayaa waxaa lagu soo qabtay 9-xubnood oo ka tirsan kooxda Al Shabaab kuna wajahnaa Buuralayda Golis iyo Magaalada
Boosaaso si ay uga fuliyaan falal argagaxisonimo, waxayna hey’adaha amnigu ku wadaan baaritaan dhamaystiran.
Waxay ciidamada amniga Puntland ku amaanyihiin dardarta amni-sugidda iyo
ka hortaga falalka argagaxiso ay damacsanaayeen kooxda Al Shabaab inay ku waxyeeleeyaan amaanka Puntland. Bilihii la soo dhaafay ayaa ciidamada
amniga Puntland waxay wadeen howlgalo isdabojoog ahi oo lagu xoojinayo amaanka gobolladda Puntland.
Noofember 18, 2012 at 9:29 pm
haa awal ayey saxaaada caalamka shegtay in alshabab ay puntland u sooguuren
Noofember 20, 2012 at 9:01 am
ilahey hanagaqabto wixi dhib i shar u wada umada islaamka ah iyo dad weynaha somaliyeed alshabaab wa damiir lawayaal an ogeyn din iyo dantodaba wa dad khasaray o halagsamay iyago nool ayaan darana qof isago og cadabta u tartamaya inu horeyo cadab donayaal u tartama cadabta faaidadeda wa arki dontane
Aamino Moham,ed says:
Noofember 25, 2012 at 11:52 am
Haday shabaab yihiin Dadkaan maxay culays noogu keentay? Madaxweyne Faroole haday shabaab yihiin nooga geeya Galmudug ha baartee ileen iyagu ma jeclee waa ayagii qarxiyay Madaxweynahooda Cabdi Qeybdiid
Cabdi Puntland says:
Noofember 25, 2012 at 11:47 am
Cabdi Amiin says:
Noofember 25, 2012 at 11:50 am